I-LuckyMetrics: UkuKhangela ukuKhangela ngokuSebenzayo okuKhokhelwayo Martech Zone
NgoLwesibini, Meyi 28, 2013 NgoLwesihlanu, ngoJuni 19, 2015 Douglas Karr
Umndilili wakho kubahlalutyi Iphakheji inokuba yinto enzima kakhulu ukuba uzama ukubeka esweni ukusebenza kwakho kokuhlawulwa kunye nokuhambelana. NgeMatriki yi kubahlalutyi iqonga elidityaniswa neAdwords zikaGoogle, iiNtengiso zeBing, Clickbank, AWeber, Mailchimp kunye nePayPal ukubonelela ngeemetrikhi ekufuneka uzijongile kunye nokwenza ngcono ukukhangela okuhlawulelweyo kunye nentsebenzo yentengiso.
Yeyiphi imimandla yejografi enenzuzo?
Zeziphi iiyure zosuku? Zeziphi iintsuku zeveki?
Ngawaphi amagama aphambili ekufuneka uyeke ukubhida kuwo, yeyiphi ekufuneka uyinyusile ibhidi yakho?
Qaphela: Sifake iqhagamshelo lethu lokudibana kweLuckyMetrics kwesi sithuba.
Zeziphi ii-CMOs ekufuneka uzazi malunga nokuNgena kweNtlalo